Malunga nathi -Shenzhen Yurucheng Dental Material CO., LTD
Ifumaneka kwindawo ekhethekileyo yoqoqosho yaseShenzhen, i-Shenzhen Yurucheng Dental Material CO., LTD lishishini elibanzi elijolise ekuphuhliseni, ukuvelisa kunye nentengiso ye-Dental Zirconia Ceramic Block.
I-Yurucheng yazisa imigaqo-nkqubo yetekhnoloji kunye nokujolisa ebantwini, kugxila kwi-R & D, ukuzinikezela ekunikezeleni ngobungcali, umgangatho ongcono kunye nemveliso ekhuselekileyo kwizigulana zomlomo.
I-YUCERA ineqela lobuchwephesha elinamandla, i-60% yamalungu ayo ziingcali eziphezulu zebhayoloji kunye neengcali ezikrelekrele ze-CNC. Kwakhona, i-YUCERA isebenzisana namaziko amaninzi awaziwayo amaTshayina ukwazisa itekhnoloji yokuvelisa phambili ukusuka ekhaya nakwamanye amazwe.
Intsebenziswano yaMazwe ngaMazwe
I-Yurucheng isungula intsebenziswano kunye neziko elikhulu lokulungisa amazinyo kunye nezibhedlele zomlomo, ufumane ukusebenza okubalaseleyo ebaleni kwaye ufumane ubuchwephesha obuhle kunye nezigulana.
Iimveliso zethu eziphambili zentsimbi yokufakelwa kwe-zirconia block block, izixhobo ze-CAD / CAM ezihambelanayo, izixhobo zokuprinta ze-3D kunye nezinye iimveliso zamazinyo. Njengomthengisi wezinto zomlomo oqeqeshiweyo, sinokubonelela ngezixhobo zedigital zamazinyo, izixhobo zamazinyo, kunye noluhlu olupheleleyo lweemveliso kunye neenkonzo zedijithali.
Ukuphuhlisa iMarike zeHlabathi, sizibophelele ekuphuhliseni uphawu olugqwesileyo lwezixhobo zamazinyo zedijithali.
Uphuhliso lwethu luvela ekusukeleni okungadinwayo kunye nokuyila okungapheliyo.
1. IYucera isungula intsebenziswano neziko elikhulu lokulungisa amazinyo kunye nezibhedlele zomlomo, ufumane ukusebenza okugqwesileyo ebaleni kwaye ufumane ubuchwephesha obuhle kunye nezigulana.
2. Sele sidlulisile isiqinisekiso se-CE kunye ne-ISO.
Ndiqinisekile ukuba umzi-mveliso wethu ulungile ngokwaneleyo kwinkqubo yakho kwintengiso yakho.
Wamkele naziphi na izimvo.
Uqeqesho yikhosi ephambili yawo onke amalungu kwaye siya kucwangcisa uqeqesho olwahlukeneyo ukusinceda ukuphucula ubuchule bethu kwaye Masifumane ubuhle bobomi. Siyalixabisa ixesha lokufunda nokufunda kunye.